Wararka - dhismaha kooxda
Ogosto 22, 2018, iyadoo loo marayo abaabulka xarunta maamulka shaqaalaha, qaar ka mid ah shaqaalaha TRUE POWER ayaa hal saac u kaxeeyay saldhiga horumarinta hoteelka Jinsha bay, waxayna bilaabeen tababarka horumarinta hal maalin ah. Qof kastaa wuu qoslay oo qoslay jawiguna wuu sareeyay. Ujeedada tababarkan ballaarinta ayaa ah in loo oggolaado qof walba inuu yareeyo culeyska shaqo maalmeedka, kor u qaado niyadda, iyo inuu sare u qaado dareenka lahaanshaha shaqaalaha ee kooxda; ka caawi shaqaalaha cusub inay si dhakhso leh ugu dhex milmaan kooxda, loo kordhiyo fursadaha wada xiriirka u dhexeeya waaxyaha, iyo in la wanaajiyo wadajirka guud ee kooxda; kor u qaad ruuxa shaqaalaha inay ku dhiiradaan inay dagaallamaan, oo aan ka cabsan dhibaatooyinka, oo ay si geesinimo leh hore ugu socdaan, ayna xoojiyaan dareenka wada shaqeynta kooxda iyadoo loo marayo waxqabadka midabka rasaasta midabka leh
10: 10-kii subaxnimo, tababbarka ballaarinta waa bilow. In kasta oo cadceeddu gubayso, haddana qof kasta xamaasadiisa kama yaraan. Tababaraha tababarku wuxuu u heellan yahay hagidda, asxaabtiina si firfircoon ayey u wada shaqeeyaan, ha ka cabsanin dhibaatooyinka, waxayna ka wada shaqeeyaan inay ku dhammaystiraan dhammaan mashaariicda xikmad wadareed ee mashaariicda caqabadaha isdaba jooga ah. Ugu dambeyntiina, kooxdeena yeey ayaa guuleysatay guushii kooxda. Ka dib markii "wada-barashada koox wada-dhiska", "shinni yar", "dabaysha dab-damiska", "paintball iyo dagaal" iyo mashaariic kale, waxaan si qoto dheer u bartay, "awoodda kooxdu waa mid aan dhammaad lahayn!", "Naftaada aamin, aamin kooxda ", dadaallada kooxda, waxaan si fiican ugu dhammaysan karnaa hawlo kala duwan! “,” Xoojinta xiriirka ka dhexeeya dadka! ”Kuwani waa khudbadaha dhabta ah ee ardayda tababarka kadib. Haa, illaa iyo inta aan wada shaqeyneyno, kooxdayadu way sii xoog badnaan doontaa, waxay ka guuleysan doontaa hal dhib ka dib midba midka kale, waxayna abuureysaa natiijooyin wanaagsan.
18650 Nimh, 3.7 Batariga dib loo buuxin karo, 12v Lithium Ion Batariga dib loo soo celin karo, 12 Volt Xidhmada Laydhka Lithium Dib u Soo Celin Kara, Li Battery, Batariga Lithium Ion Polymer, Dhammaan Alaabooyinka